के वेब २.० डिजाइन भत्काउनु पर्छ? | Martech Zone
आइतवार, नोभेम्बर 25, 2007 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
इलियट जे स्टक डिजाइनरहरूको लागि युद्ध रोइरहेको छ ... वेब २.० लुक त्याग्नुहोस् र तपाइँको ग्राहकहरु को लागी लड्न जो यसको लागि धक्का दिन्छ।
नोट: भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस् इलियटको साइट, डिजाइन बिल्कुल आश्चर्यजनक छ।
म इलियटसँग असहमत छु कि यो नष्ट हुनुपर्दछ। बजार क्षेत्र मा काम गर्दै, तपाईं डिजाइन गर्न एक झुण्ड मानसिकता छ कि पहिचान। कम्पनीहरू जस्तै एप्पल केहि गहिरो जेब छ र आफ्नो ब्रांड संग सम्बन्धित डिजाइन प्रतिभा को एक अपेक्षा छ। उपभोक्ताले एप्पलको उत्पादहरू, प्याकेजि and र मार्केटि associatedसँग सम्बन्धित डिजाइनहरूले नयाँ जमिन तोड्ने अपेक्षा गर्दछ। (प्रवक्ताको एक तर्फ उज्यालो प्रकाशको साथ कालो पृष्ठभूमि विज्ञापनहरू बाहेक ... मलाई लाग्छ यो हास्यास्पद देखिन्छ)।
बाँकी कम्पनीहरू नेतृत्व अनुसरण गर्न उत्तम उपयुक्त छन्। जसरी फेशनले ट्रेन्ड अनुसरण गर्दछ, त्यस्तै डिजाइन पनि। 'हर्ड' ले दृश्य सौंदर्यशास्त्रको कदर गर्दछ जसले यो संकेत गर्दछ जुन यो एक विशिष्ट प्रवृत्ति वा प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। जब म एक नयाँ अनुप्रयोग जस्तै आउँछ मिक्सक्स or आरएसएस हगर, मैले कहिल्यै अनुप्रयोग खोल्नु अघि, म दृश्य दृश्यमा हिर्काउँछु कि यो एक नयाँ टेक्नोलोजीमा निर्मित अनुप्रयोग हो।
व्यक्तित्व र रचनात्मकता महत्त्वपूर्ण छ, तर जब सबैजनाले बुट लेग जीन्स लगाइरहेका छन् र तपाई घण्टीको बोटमा देखाउनुहुन्छ, व्यक्तिहरूले तुरून्त तपाईंको फेसन भावनामा प्रश्न गर्नेछन्। सहि वा गलत, यो मानव व्यवहार हो। यस दिन र उमेरमा जहाँ उपभोक्ताहरू द्रुत रूपमा सर्दै छन् माइस्पेस लाई फेसबुकवा twitter लाई Tumblr, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको डिजाईनले इम्युलेट गर्दछ कि तपाईंले भर्खरकोलाई अपनाउनुभयो फैशन वेबमा
म एक प्रतिभाशाली कलाकार र अद्वितीय डिजाइनरको रूपमा इलियटको रायलाई सम्मान गर्दछु, तर म सिफारिस गर्दछु कि कम्पनीहरूले अझै वेब २.० डिजाइन स्क्र्याप नगर्न। इलियटले पनि स्वीकार गर्छन् कि बथानलाई पछ्याउने असल कारणहरू छन्। इलियट र मँ वास्तविक चुनौतीमा सहमत छौं: कसरी वेब २.० सौंदर्यशास्त्रको सीमाहरू भित्र काम गर्ने र अझै पनि मौलिक भएको रूपमा आउनेछ। र यदि तपाइँ कुन तत्वहरू कुञ्जी हो भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ भने इलियटले वेब २.० डिजाइनसँग सम्बन्धित सबै सौंदर्यशास्त्रको साथ एक उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण राख्दछ।
टैग: इलियट जय स्टक2 वेब2.0 वेबवेब डिजाइन
के हुन्छ यदि ब्लगर्स स्ट्राइकमा गए?
नोभेम्बर २०, २००। 25::2007 अपराह्न
विशिष्ट मायोपिक र आत्म-केन्द्रित डिजाइनर। मैले उसको पोष्ट पढें र त्यसपछि उसको प्रस्तुतीकरणमा केही वास्तविक अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्ने आशा गरेको देखे तर केवल एक पोस्ट भेटिए जुन उनको FOWD दर्शकहरूको नाचलाई प्रचार गरिएको थियो; एउटा समूह जसको साझा नीतिन व्यवसाय लक्ष्यहरूको बारेमा चिन्ता नगरिकन रचनात्मक स्वतन्त्रता चाहान्छ। विडम्बना यो वेब एजेन्सीको वेब २.० संस्करण हो जुन उनीहरूको ग्राहकको तल्लो रेखामा राजस्व ड्राइभिंगमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा रचनात्मक पुरस्कारहरू जित्न केन्द्रित गर्दछ।
म ज्याकोब निल्सेन र धेरै धेरै ध्यान दिन चाहन्छु नीलसनको कानून: "व्यक्तिले तपाईको भन्दा धेरै पटक अन्य व्यक्तिको वेबसाइट प्रयोग गर्दछन् (त्यसैले तपाइँको साइटलाई अन्य साइटहरूसँग सुसंगत बनाउनको उपयोगिता बढ्दछ र त्यसकारण तपाईको व्यावसाय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न राम्रो मद्दत गर्दछ।)
हेर्नुहोस्, चुनौती भनेको धेरै गैर-डिजाइनरहरूले आफ्नै साइट डिजाइन गर्छन्। हामी कोहीहरू श्री स्टक्स जस्ता साइट डिजाइन गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं, यद्यपि हामीसँग सीप र / वा त्यसो गर्न बजेटको अभाव छ।
"वेब २.०" को बारेमा कुरा गर्दा, हो डिजाइन उल्लेख गरिएको छैन, जे होस्, हामी सबैको हेराई बुझ्छौं: चम्किलो सामानहरू, लाइनहरू, गेve्कित किनारहरू, परावर्तनहरू, र बाहिरी चमकहरू ... (मलाई लाग्छ कि मैले ती सबैलाई पनि कभर गरें!) । अवश्य, सबैजना बोर्डमा उफ्रँदै छन् र यसका साथ बक-वा wild्ल्डमा जान्छन्, यद्यपि, यदि हामी विकल्पहरूलाई हेर्‍यौं भने, हामीसँग रंगको ठूलो हksक रहन्छ (जुन सँगै काम पनि गर्ने वा नगर्ने पनि), गहिराईको पूर्ण अभाव, र दुखद Webdings वा नराम्रो, क्लिप-कला ...
वेब २.० लुक हामी सबैको लागि हो जुन हामी बुझ्दछौं कि हामी वास्तवमै राम्रो डिजाइनरको सीपको अभाव छन, तैपनि त्यसमा केही प्रयास राख्नुको महत्व बुझ्दछ पूर्वनिर्धारित वर्डप्रेस थिममा पाठ परिवर्तन गर्नु भन्दा अगाडि ...
एबुट वर्डप्रेस (सीएसएसको बारेमा ठीक छ) मध्ये एक मुख्य चीज यो हो कि यसले डिजाइन र सामग्री अलग गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ एक सुन्दर डिजाइन गरिएको विषयवस्तु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र पछि डिजाइनको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्।
म एकको लागि हाल न्यूनतम मार्गमा जान प्रयास गर्दै छु, र एक प्रकारको केन्द्रित विषयवस्तुको साथ वरिपरि खेलिरहेको छु।
इलियटको सब भन्दा राम्रो, सबैभन्दा चिन्तित-WordPress वर्डप्रेस थिम छ जुन म भित्र आयो। आश्चर्यजनक र प्रेरणादायक।
मँ सहमत छु, मोडिफू! म मेरो डिजाइनमा अप्ठ्यारोमा छु जब उसको राम्रोसँग डिजाइन गरिएकोमा पनि।